Fiomanana manoloana ny rivo-doza « Batsiray » – FJKM Ambavahadimitafo Fiomanana manoloana ny rivo-doza « Batsiray » |
Fiomanana manoloana ny rivo-doza « Batsiray »
Publié le 04 février 2022 à 02:02
Hafatra avy amin’ny mpitandrina Randrianarisoa Alain :
« Ary Jesoa niteny…hoe : Matokia, fa Izaho ihany, aza matahotra », Matio 14:27
1. Mampahery sy mivavaka ho antsika noho izao loza manambana eto @firenena izao.
2.Mahatsiaro am-bavaka sy mirary fahasalamana ho an ‘ireo marary rehetra.
3.Mampahafantatra antsika fa MISOKATRA NY FIANGONANA ny Alahady 6 febroary ary manasa antsika rehetra hiara iombombavaka.
4.Manentana antsika rehetra hifampivavaka any @ isan-tokantrano sy hanara-baovao hatrany (avy @Foibe FJKM sy ny Fanjakana).
Mirary ny fiadanan’ny Tompo ho amintsika rehetra samia hotahin’ny Tompo Jesoa.
« Andriamanitra no aro sy hery ho antsika« , Salamo 46 and 1